Life Style – Maharmedianews
January 18, 2020 January 19, 2020 admin555
ပျော်ရွှင်တဲ့ ကလေးရဲ့ နေအိမ်မှာ..ကစားစရာ အကျိုးအပဲ့တွေ..နံရံပေါ်မှာ ခြစ်ရာတွေ..Sticker အပြည့်နဲ့ အခန်းနံရံတွေ.. စုတ်ပြတ်နေတဲ့ စာအု့ပ်တွေ..ခြေ ချစရာ မရှိတဲ့ အိမ်..ကစားစရာမဟုတ်တဲ့ ကစားစရာတွေ..အစွန်းအထင်း အပြည့်နဲ့ အကျီ အသစ်တွေ..စနစ်တကျ ရှိချင်မှ ရှိမယ်.. ဆူညံမှုနဲ့ အတူ..နွေးထွေးမှု
အဝတျအစားစုတျပွတျနဲ့ ဈေးလာဝယျလို့ဆိုပွီး ရှောငျဖယျဆကျဆံခံခဲ့ရတဲ့ သနားစရာသားအဖ
January 18, 2020 admin555
လောကမှာ အဆငျ့အတနျးခှဲခွားဆကျဆံတယျဆိုတာ မရှိသငျ့ပါဘူး ယနလေို့ လူ့အခှငျ့အရေးကို အလေးထားတဲ့ ခတျေကွီးမှာ သူကတော့ ရုပျဆိုးလို့ သူကတော့ ပိုကျဆံမရှိဆငျးရဲလို့ သူကတော့ စုတျပွတျနလေို့ ဆိုပွီး….. ခှဲခွားဆကျဆံတာကို ဘယျသူကမှ လကျသငျ့မခံတော့ပါဘူး လူဟာ လူလို့ပဲ မွငျကွပွီး
January 18, 2020 January 18, 2020 admin555
ကျန်းမာ​ရေးအရ. ….. ပုဂ္ဂလိက​ဆေးရုံသွားရ ပါရဂူကြီးနဲု့ပြဖို့ပါ ….. တုန်​ကင်​နံပါတ်​ ၅၈ စိတ်​​ရှေလက်​​ရှေ​စောင့်​…. ချိန်းတာက ၅ နာရီ ​ဆရာ​ရောက်​​တော့ ……. ၇ နာရီ​ကျော်​ ​မျှော်​ရတာရင်​​မော …….. ခုမှသက်​ပြင်းချရ ​နေ့စဉ်​​ဆေးခန်း ၇
ဘဝတှေ ခါးသီးလှနျးလို့ သတောမှ ကောငျးသေးတယျ တဲ့လား
January 17, 2020 admin555
ကြှနျမ အသိနောကျကခြဲ့ပွနျပီ။ မနကေ့ ” စုံညီပှဲတျောမှာ က,​ခငျြလို့ သူသား ရထားတဲ့ ပညာရေးထောကျပံ့ကွေးငှေ ၂သောငျးကပျြကို သူ့ဆေးဖိုးအတှကျ မသုံးတော့ပါဘူး။ ရှမျးဝတျစုံလေး တဈစုံ ဝယျပေးပါ” ဆိုပွီး ၄မိုငျလောကျ ဝေးတဲ့ကြောငျးကို တုတျကောကျနဲ့ သမီးပေါကျစ
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ စေတီတော်များရဲ့ ဂေါပကများ အတုယူနိုင်ဖို့ ဦးဇိနစေတီတော်ရှိ အများသုံး အခမဲ့ သန့်စင်ခန်းများ
January 13, 2020 admin555
မော်လမြိုင်မြို့ ဦးဇိနစေတီတော်ရှိ အများသုံး အခမဲ့ သန့်စင်ခန်း သန့်စင်ခန်းထဲ သန့်ရှင်း မွှေးပျံ့နေလို့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ဘုရားဖူးတွေ ကျန်းမာရေးအတွက်အဆင်ပြေလှသလို သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုခလည်း တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မပေးရပါဘူး။ Ashin Sanda Zawti မွနျမာနိုငျငံအနှံ့အပွားရှိ စတေီတျောမြားရဲ့ ဂေါပကမြားအားလုံး
မိဘရဲ့အတ္တကြောင့် မုန့်ဟင်းခါးတပွဲအတွက် အသက်ပေးခဲ့လိုက်ရတဲ့ သနားစရာ ကလေးမလေး…
ဟိုတလောက ညီတယောက်လို ခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီ ကိစ္စလေးရှိလို့ သွားဖြစ်တယ်။ချိန်းထားတဲ့ အချိန်နည်းနည်း ကပ်သွားလို့နဲ့ တူပါရဲ့။သူတို့အိမ်မှာ ရောက်နှင့်နေတဲ့ ဧည့်သည်တွေလည်း မပြန်ကြသေးဘူး။ကိုယ်နဲ့လည်း မျက်မှန်းတန်းပြီးသားတွေမလို့ သူတို့ကလည်း ခေါ်တာနဲ့ ထွေရာလေးပါး ပြောဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ ဧည့်သည်အတွက် ချပေးထားတဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ တစ်ထောင်တန်ကို မြင်တော့ နစ် ၄၀ ကစုထားတဲ့ ငွေစက္ကူလေးတွေထုတ်ပြတဲ့အဖွား (အံ့ဩလို့မဆုံးဘူး)
January 9, 2020 January 9, 2020 admin555
ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ တစ်ထောင်တန်ကို မြင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၄၀ ကစုထားတဲ့ ငွေစက္ကူလေးတွေထုတ်ပြတဲ့အဖွား (အံ့ဩလို့မဆုံးဘူး) ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံငွေစက္ကူရလို့ အဖွားကိုပြန်ပြတာ အဖွားက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(၄၀)ကစုထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူလေးတွေထုတ်ပြတယ်။ ၅ ကျပ်တန် – ၉၇၀
January 8, 2020 admin555
ဒီကနေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာ အီရတ်မှာ စခန်းချထားတဲ့ အမေရိကန်လေတပ်စခန်းကို ဖျက်အားပြင်း ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည် ဒါဇင်လိုက်နဲ့ အီရန်ကနေ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက အီရန်နိုင်ငံရဲ့ စစ်တပ်အကြီးအကဲ ကာဆမ်ဆူလေမာနီကို အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ အမိန့်ပေးသတ်ဖြတ်မှုအပြီး အီရန်က တုန့်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာ
ပီတိ —- မနညေ့က ရနျကုနျလဆေိပျမှာ Chengdu ဖလိုကျမောငျးဖို့ ခရီးသညျတှတေငျတယျ
January 7, 2020 admin555
ပီတိ —- မနညေ့က ရနျကုနျလဆေိပျမှာ Chengdu ဖလိုကျမောငျးဖို့ ခရီးသညျတှတေငျတယျ။ လယောဉျတံခါးပိတျအပွီး Boarding Bridge (ခရီးသညျတငျပေါငျးကူးတံတား) လညျး ခှာပွီးရော ပွဿနာက စတော့တာပဲ ခရီးသညျတဈယောကျက လဆေိပျထဲမှာ သူ့ပိုကျဆံအိတျ ကနျြခဲ့တယျလို့ လယောဉျမယျကတဆငျ့